Akụkọ - CACLP 2020 Otu ọkụ nwere ike ịmalite ọkụ ọkụ
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd nwere ihe ịga nke ọma sonyere caclp2020
N'ịbụ nke COVID-19 na-emetụta, ihe ngosi CACLP agafeela usoro ntụgharị na ntụgharị. Na August 21-23, 2020, anyị mechara webata 17th International Laboratory Medicine and Blood Transfusion Instrument and Reagent Exposition (CACLP) na Nanchang Greenland International Expo Center. Ngosi a gosipụtara mpaghara 70000 square mita ma ụlọ ọrụ 1006 si na ụlọ ọrụ dum nke vitro nchọpụta na-aga n'ụlọ na mba ọzọ. N'otu oge ahụ, ihe ngosi ahụ nwekwara nke ọma emere "7th China in vitro nchoputa Mmepe Mmepe Mmepe" na "Voice of Innovation" 5th China Experimental Medicine Conference / Wiley International Academic Conference on in vitro diagnostics, the first Excellent Presidents Forum, the nke atọ nzukọ ntorobịa Forum na na Vitro Diagnostics, nke abụọ China IVD Circulation Enterprise Forum, nke atọ IVD Raw Materials na Parts Forum na ihe fọrọ nke nta 100 enterprise pụrụ iche nzukọ.
The Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ngosi dị na A5-S04. Oge a, anyị were ọtụtụ ngwongwo nuklia acid, ngwa PCR, akụrụngwa nke magnet bead na ihe ndị ọzọ na-achọpụta ihe nyocha na ngwaahịa nyocha ngwa ngwa iji sonye na ngosi ahụ. N'ime ha, igwe ngwongwo POCT mejupụtara bụ oge izizi ịpụtara na ngosi CACLP, ma dọta uche ọtụtụ ndị na-ekesa ya na ndị ọgbọ ya kemgbe ọ pụtara na mbụ. Ọ bụ ihe omume ahịa-enyi na enyi, Ndị ọbịa gosipụtara ọchịchọ ha ịkwado. Ndị ọrụ Bigfish Bio-tech Co., Ltd. zara ajụjụ nke ndị na-ege ntị na ndidi na nlezianya na saịtị ngosi ahụ, gbanwere ọtụtụ nkwukọrịta ma gbanwere kaadị azụmahịa maka kọntaktị na-esochi.
Molekụla POCT ike igwe
Bigfish Bio-tech Co., Ltd. sequencing nucleic acid wepụ
Magpure virus mmịpụta Kit
Usoro PCR ngwa ngwa
Site na ihe ịga nke ọma nke CACLP 2020, a ga-enwe ihe ngosi ndị ọzọ ọrịa ahụ metụtara otu otu ọzọ. Dị ka nnukwu mba na-emepụta ihe, ngwaọrụ ahụike dị elu bụ otu n'ime mpaghara ole na ole China enweghị asọmpi n'ụwa. N'ime ihe ngosi a, enwere m mmetụta miri emi na ndị na-emepụta ụlọ nke IVD agbakọtara site na nkesa, ọnụ ọgụgụ ụlọ ntu na ngwaahịa IVD dịgasị iche egosipụta. Anyị ga-enwe mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ ibe na mụbaa ụlọ akụrụngwa.
More ọdịnaya, biko ntị ka ukara WeChat ukara akaụntụ nke Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd.